Best Mobile Spy App For Android
On: Jul 22Author: adminIzigaba: Android, Cell Ucingo Spy, Cell Ucingo Tracking, Employee Ukuqapha, Faka Hambayo Spy, Hambayo Ucingo Ukuqapha, Spy Mobile, Ehambayo Spy Online, Gada Inthanethi Sebenzisa, Control Zomzali, Spy Facebook Messenger, Spy For Android, hlola Hambayo ze-smartphone, Inhloli Izingcingo, Inhloli SMS, Spy Skype, Spy Viber, Spy WhatsApp, Track GPS Indawo Ayikho Amazwana
exactspy-Best Mobile Spy App For Android is one of the finest cell phone spying apps specially built for business & family, for monitoring your employees or family members. You can track user activities of the target phone (android or iOS iPhone device) remotely via a secure control panel online account. From there you can reveal everything, record/listen to phone surroundings, ngomkhondo GPS indawo, view contact, imeyili, Imiyalezo ye-SMS, ukuphequlula umlando, shayela izingodo, bookmarks, access media files (like izithombe & imiqophi), block apps, remote control, lock the device remotely and etc. And more importantly exactspy-Best Mobile Spy App For Android is completely hidden and undetectable. Apply this mobile spy system to your business to find out cheating employees and to improve productivity, or use it as a parental control to protect your child.
Once you register Free and use trial 48h for exactspy-Best Mobile Spy App For Android, uba isikhokhelo bese thwebula lokusebenza ukuthi ngeke agijime ohlala on the phone target cell. With a server internet omuhle, uhlelo lokusebenza ukuthumela iqala izingodo nezinye ulwazi exactspy amaseva ezinkampani ukugcinwa kanye ukubuyisa ngokusebenzisa web browser-based control panel kufinyeleleke usebenzisa zokubhalisa ID yakho kanye nephasiwedi.
A good amount of functionality are offered with the exactspy-Best Mobile Spy App For Android
1. Gada Global Positioning System Indawo
exactspy zingase zihlelelwe ukulandelela GPS navigation indawo focus yakho ngokulandelana ngomakhalekhukhwini. Thola ukwazi uma indodana yakho lapho okufanele ube yikho noma uma isisebenzi yakho sezimoto ngempela.
2. Imiyalezo sms Track
Le foni mobile application ngibheka kukuvumela ukufunda yonke imilayezo semibhalo okuqukethwe nolwazi soxhumanoningi ngeposi noma wathola ngenhloso phone umthengi. Lezi ethulwa for fast ebuka yize kucis.
3. Unake ucingo
exactspy ikuvumela ukuba ubone zonke izingcingo ezingenayo / aphumayo usebenzisa isikhathi sabo futhi Isitembu sesikhathi. Godu, le ephathekayo ukugcinwa ithrekhi software kungenziwa elalakhelwe emlandweni izingcingo ezihloselwe nobe kusuka ezihlukahlukene yakho achazwe ngaphambilini. Ngeke singawanaki kancane!
– Ukuqopha call
4. Gada Inthanethi Sebenzisa
Buka konke ama-URL sima ngumthengi in ngomakhalekhukhwini web isiphequluli. By ifuna ngokusebenzisa ukuphequlula umlando wabo, hlola ukuthi yini uku afinyelela ku-inthanethi.
5. Ukubhekana Reserve
Hlola ngamunye enze ukuxhumana sangena deal ifoni reserve bese ugcine ithrekhi zonke umsebenzi single kusuka schedule yefoni.
6. Funda imeyili Quick
Sebenzisa lesi sici ukubika eminakweni kusuka Skype, iMessage no Whatsapp and Viber imibiko services professional isetshenziswa efonini ababezoba. Bheka Social Media izinkulumo futhi ufunde ngokuvamile futhi awakhe kanjani lokho focus on mobile phone ikhasimende ukuthumela imiyalezo mayelana.
– Spy fuel
7. Ambient Saving or Hlala Sound
Nakani nokubika azungeze ifoni ephathekayo.
8. Buka Multi-media Amafayela
Lolu hlelo ephathekayo software security kwenza ubone amavidiyo nezithombe ukuthi basindiswa efonini goal cell. Isikhathi ngasinye ingane noma sabasebenzi idatha yakho yevidiyo efanele noma isithombe usebenzisa cell phone wabo ikhamera digital, kuyokwenziwa masinyane alayishiwe akhawunti exactspy.
With nomakhalekhukhwini bamane kokuba ngokuvamile ezilahlekile noma ezebiwe, imininingwane ukugqekeza siya ezivame kakhulu. By ukude ukusula idatha yakho phone kwelitshe nobe uvala idivayisi, wenza isiqiniseko idatha yomuntu siqu angawi ezandleni ezingalungile.
10. Ukuhlola It
Kungenzeka ukudala lolu hlelo umakhalekhukhwini kokulandela okukhiqiza in Ukujula izifundo umgomo zocingo ukusetshenziswa. Uma udinga ukulawula futhi ulandelele abaningi omakhalekhukhwini ngesikhathi esisodwa, usebenzise lesi sici.
exactspy, kuba uhlelo lokusebenza mobile ezenziwe izinkampani nonina kanye noyise ngempela. Kuhlanganisa a Disclaimer enkulu: "exactspy wenziwa ngenxa nokuqapha labasebenzi lwakho, izingane noma ezinye abantu nge iselula noma ngomakhalekhukhwini enisanda siqu noma ube ukugunyazwa ezifanele ukuqapha.
Njengoba for izindleko lokusebenza, the premium feature ohlwini izindleko $15.99 ngenyanga lezi zindleko zokunakekelwa. Uma oshade naye noma umsebenzi ukukopela kuwe noma inkampani yakho, le izindleko ngaphandle kokungabaza, ngenani elincane ukukhokha ukunquma. It amanani ashibhe ukuwedlula spy application, ngokungafani to mSpy, Ifoni ephathekayo Spy, Steathgeine..
You Can Download: Best Mobile Spy App For Android
Insiza Android inhloli oshade naye, Best Mobile Spy App For Android, Free Hambayo Spy lokusebenza For Android, Spy app for android free download, Spy app for android undetectable, Spy app for android without target phone, Text spy app for android free
← How To Free Mobile Spy Application Download ?
→ Best Imfono Spy App For iPhone